Hanao ho laharam-pahamehana ny herinaratra eny ambanivohitra ny fitondrana, araka ny nambaran’ny filoha Rajaonarimampianina, omaly teny Iavoloha. Nandray ny delegasion’ny orinasa amerikanina, Fluidicenergy, tamin’ny alalan’ny filoha lefitra, Dennis Thomsen, ny tenany. Anisan’ireo orinasa lehibe misahana ny fampidirana herinaratra any ambanivohitra amin’ny alalan’ny angovo nohavaozina ny Fluidicenergy. Hijery ny fiaraha-miasa amintsika momba izany ireto vahiny ireto.
Hanao fanambarana momba ny fandraisana an-tanana ny fomba fanarenana ny fanendrena ny solontenan’ny firaisamonim-pirenena ao amin’ny HCDDED ny eo anivon’ny Rindran’olom-pirenena hiarovana ny iaraha-manana (Fiarahamonim-pirenena Rohy). Hotanterahina etsy amin’ny Cite Ambatonakanga, anio maraina, izany.
Miofana momba ny arofentitra ireo mpiasan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra, nanomboka, omaly etsy Analakely. Mandray anjara amin’izany ireo anivon’ny sampandraharahan’ny arofenitra sy ireo mpiasa misahana ny fifandraisana amin’ny any ivelany eto amin’ny fitantanana sy fampandrosoana ny Tanàna. Tanjona ny hifehezana ny arofenitra sy ny fahaizana manaja ny ambaratom-mpahefana rehetra.